केहि व्यक्तिको गलत नियतका कारण सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुँदै « Sahakari Nepal
केहि व्यक्तिको गलत नियतका कारण सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुँदै
प्रकाशित मिति : 24 November, 2014 2:02 am
सरकारी निति नै फितलो
काठमाडौँ, ८ मंसिर–
पछिल्लो समय नेपालमा पनि सहकारीको विकास हुँदै गएको छ । अझ भनौँ सहकारी संस्थाहरुको संख्यामा तिब्र बृद्धि हुँदै गैरहेको छ । वि. स.२०१० सालमा नेपालमा सहकारी विभागको स्थापना भएकोसँगै सहकारी संस्थाहरुको विकास हुँदै आएको छ ।
यद्यपी सहकारी संस्था भने नेपालमा वि. स. २०१३ सालमा स्थापना भएको हो । नेपालको पहिलो बखान सहकारी संस्था स्थापनासंगै नेपालमा सहकारीको अवधारण सुरु भएकोे हो । सहकारीको बिकाससँगै नेपालजस्तो बिकासोन्मुख मुलुकमा सामुहिक तथा ब्यक्तिगत उन्नतिमा टेवा पुगिरेहको छ । सहकारीका माध्यमबाट गाउँघरमा बिभिन्न ब्यवसायहरु सञ्चालन गरी सर्बसाधारणहरु फाइदा लिइरहेका छन् । तर सहकारी संस्थाको विकास भएसँगै सहकारीका नाममा सर्बसाधारहरु ठगिने क्रम पनि बढ्दै गईरहेको छ । केही सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुको गलत नियतका कारण सहकारी क्षेत्रप्रतिको विश्वाश घट्ने कुरामा दुइ मत छैन ।
अहिले पनि बिभिन्न सहकारी संस्थाहरुहरुका संचालकहरुले धेरै ब्याज दिने लोभ देखाई सर्बसाधारणहरुको पैसा जम्मा गरेर भाग्ने समस्या सुन्नमा आइरहेका हुन्छन् । अथवा बचत गराउने नाममा पैसा ठगी गर्दै हिड्ने गिरोह नै सक्रिय भएको देखिन्छ । सहकारीका नाममा ठगिने प्रबृत्तिमा कमी ल्याउनका लागि सरकारले नै कडा खालको सहकारी निति ल्याउन जरुरी देखिन्छ । सरकारले नै कडा निति नियमहरु ल्याउन नसक्दा सर्बसाधारणहरु ठगिने क्रम बढेको काठमाडौँमै सहकारी सञ्चालन गरिरहेको गलकोट घुम्टे बहुउद्देयीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रशान्त ढकाल बताउँछन् । उनले सहकारीलाई रामोसंग नबुझी बचत गर्ने प्रबृत्तिले मानिसहरु ठगिने गरेको उनको दाबी छ । यसैगरी अर्कोतर्फ सहकारी निति प्रभावकारी नभएका कारण सहकारी संस्थाहरु नै संकटमा पर्न थालेका छन् । जसका कारण ती सहकारहिरमा आवद्ध सर्बसाधारणहरुको रकम नै डुब्ने खतरा रहेको छ ।
नेपालमा हाल ३० हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाले सक्रिय रुपमा काम गरिरहेका छन् । जसमा आधा भन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी नै रहेका छन् । उपत्यकामा रहेका १ हजार भन्दा बढी सहकारी मध्ये अधिकांश सहकारीहरुबचत तथा ऋण सहकारी संस्था नै हुन् । यसमध्ये सहकारीका नाममा सबैभन्दा बढी ठगी हुने उपत्यकामा हुने गर्छ । तर सहकारी संस्थाहरुले ठग्ने नभई ठग्न बाध्य गराइने नोबेल सपि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका उपाध्यक्ष राजन न्यौपाने दाबी गर्छन । सहकारीले ठग्ने नभई सहकारीको खोल ओडेर ठग्ने बिकृत्ति बढेकाले इमानदार सहकारी सञ्चालक बदनाम हुनुपरेको उनको गुनासो गर्छन । सहकारी भन्दै विश्वाश नगर्न र राम्रोसंग बुझेर मात्रै सहकारीमा पैसाहरु जम्मा गर्न न्यौपानेको सुझाव छ । सहकारी क्षेत्रको बिकृत्तिमा कमी ल्याउनका लागि सरकारले प्रभाबकारी निति नियमलाई कडाईका रुपमा लागु गर्न नसक्नु प्रमुख कारण भए पनि सञ्चालकहरुको पनि हात रहेको न्यौपानेको भनाई रहेको छ ।
हुन त अन्तरिम संबिधान २०६३ ले नेपालको आर्थिक विकासका लागि सहकारी ठुलो खम्बाका रुपमा लिएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । यद्यपी सरकारले सहारीका लागि प्रबावकारी एैन नल्याउदा सम्म सहकारीका लागि बजेट मात्रै छुट्याएर सहकारी को दीगो विकास हुन सक्दैन । सहकारी भनेको सहकार्य गर्नु हो जसमा सहकार्य गर्नेहरु पनि अनुशाशित, तथा इमान्दार हुन जरुरी देखिन्छ । सहि इमानदार तथा अनुशाशित ब्यक्ति हरुले सहकारी चलाउँदा आर्थिक सबलिकरणमा राम्रो टेवा पुग्छ ।
यसैगरी रोजगारी बढाउन सकिन्छ । भरपर्दो र विश्वाशिलो सहकारी नितिको अभावमा सहकारी संस्थाहरले आफ्नै तरिकाले सहकारीको नियमहरु बनाएका छन् जसका कारण सर्बसाधारणहरु अप्ठ्यारोमा परिरहेका छन् । सहकारीहरुले कतिपयले सामुहिक रुपमा केहि कार्य गरिरहेका छन् भने कतिपयले बैङ्कहरुजस्तै बिभिन्न खालको बचत तथा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । सहकारीको अर्थ नै सहकार्य गर्ने बुझिएपछि बैङ्कहरुजस्तै बित्तिय कारोबार गर्नु र सरकार मोन बस्नु पनि सबृसाधारहरुलाई ठग्ने प्रबृत्ति नै हो । अथवा कतिपय व्यक्तिहरु सहकारी निति नहुदा नियतबस नभई सहि बाटो अपनाउदा अपनाउँदै ठगने र ठगिने कुरा पनि नहोला भन्न सकिन्न ।
यसरी सबै सहकारी संस्थाहरुको नियमहरुले एकरुपता पाउन नसकेका कारण पनि सर्बसाधारणहरु बढी मारमा परेका हुन् । अर्को तर्फ बचत तथा ऋण प्रबाह गर्ने बैङ्कहरु हुँदा हुँदै थोरै बढी ब्याजको लोभमा सर्बसाधारणहरु सहकारी तर्फ आकर्षित हुनु पनि उनिहरुको आफ्नै कमजोरी पनि मानिन्छ । यसैले आफु ठगिने कुरामा आफै पनि सर्बसाधारण सचेत हुन जरुरी देखिन्छ ।
नेपालमा सहकारीहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने तर सहकारी सञ्चालकहरुले समय सान्दर्भिक सहकारी निति नियमका लागि दबाब दिन नसक्नु सहकारी सञ्चालकहरुको पनि कमीकमजोरी देखिन्छ । सहकारीलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड नै बनाउनका लागि सबैले चनाखो हुन जरुरी छ । यसैगरी सरकारले सहकारी निति ल्याई प्रभाबकारी रुपमा कार्यान्वयन नगरे सहकारीको स्तर खस्कने खतरा बढ्दै जानेछ ।
यसका लागि सरकारको सहकारी निति जोगाउन र नेपालको अर्थतन्त्रको बिकासका लागि सरकाले सहकारी निति परिमार्जन र प्रभाबकारी रुपमा लागु गर्न अहिलेको ठुलो आवश्यकता हो ।